तपाईले कोसँग विवाह गर्नुभयो? - Punhill Online
तपाईले कोसँग विवाह गर्नुभयो?
२१ आश्विन २०७७, बुधबार २१:३३ मा प्रकाशित (4 महिना अघि)
‘विवाहले तपाईको जीवन बनाउन पनि सक्छ बिगार्न पनि सक्छ। यसले तपाईलाई माथि पनि पु¥याउन सक्छ, तल पनि झार्न सक्छ। यसले तपाईको चरित्रको हर चरणको आनन्द दिन सक्छ, या तपाईलाई गम्भीर विफलता तर्फ ढकेल्न सक्छ। यो एक खतरनाक गल्ती हो कि धेरै पुरुष वा महिलाले विवाहित जीवनको समस्याहरुको बारेमा कुनै प्रकारको सहि निर्देशन प्राप्त गर्छन्।’
एक राम्रो विवाहले तपाईको जीवनलाई राम्रो बनाउँछ, गुड डेब्ट जस्तै। नराम्रो विवाह ब्याड डेब्ट जस्तै हो, तपाईलाई दैनिक निराश बनाउँछ। तपाईको वित्तीय विवरण सुधार्न सकेजस्तै तपाईको वैवाहिक ब्यालेन्स सिट पनि सुधार्न सकिन्छ। विवाहमा समय र श्रोत दुबै लागत छ। राम्रो विवाहले एक गतिशील प्रतिफल सिर्जना गर्दछ जहाँ लागतभन्दा धेरै लाभ हुन्छ। राम्रो विवाह भनेको तपाईको सबैभन्दा बढी प्रतिफल पाउने गुड डेब्ट हो। अहिले ५० प्रतिशत वैवाहिक सम्बन्ध डिभोर्समा अन्त्य हुन्छ र बाँकी ५० प्रतिशत मृत्युमा।
तपाईले कोसँग विवाह गर्नुहुन्छ त्यसले तपाईको वित्तीय भविष्यलाई धेरै फरक पार्दछ। वित्तीय समस्याहरु कुनैपनि वैवाहिक सम्बन्धमा कालो बादल हुनसक्छ। एक श्रीमान र एक श्रीमतीले आफ्नो वित्तलाई कसरी सम्हाल्छ, विवाहमा त्यो केवल चरित्रको परीक्षा मात्र होइन, एकदमै व्यवहारिक परीक्षा हो।
विवाह परामर्शदाताहरु भन्छन्, वैवाहिक सम्बन्धमा झगडा हुनुको मुख्य कारण, व्यक्तित्व र दयाको भावनाभन्दा पनि बढी वित्त हो। अक्सर उद्धृत तथ्याङ्कले भन्छ कि ८० प्रतिशत डिभोर्सहरु आर्थिक कठिनाइको प्रत्यक्ष परिणाम हो। तपाईले अहिलेसम्म जानेका ८५ प्रतिशत सन्तुष्टिहरु अरुसँगको सम्बन्धबाट आउँछन् र तपाईको जीवनसाथीसँगको सम्बन्ध त्यसमध्ये प्रमुख हो।
‘असल आमाकी छोरी लैजानु’ १९ औँ शताब्दीको यो सुझाव हामीले वेवास्ता गर्नु हुँदैन। यदि तपाई जहिले पनि सामान्य कार्य गर्नुहुन्छ भने तपाईको जीवन पनि सामान्य नै हुन्छ। जब डेटिङ्ग गर्नुहुन्छ, सोरुममा राखिएका सामानहरुजस्तै सबै राम्रो नै देखिन्छन्। सामान्य बिक्री हुन्छ र सबै राम्रै हुन्छ, जबसम्म वारेन्टी र सेवाको कुरा आउँदैन। र प्राया हामी आउँछौँ कि सेल्स डिपार्टमेन्टले हामीलाई ठूला ठूला वाचा गरे र सर्भिस डिपार्टमेन्टले ति वाचाहरु पुरा गर्न सकेनन्। हामीले सोध्नुपर्छ कि ‘के मैले खरिद गरेको सामानको सेवा म पाउन सक्छु?’ वित्तीय रुपमा स्वस्थ वैवाहिक सम्बन्धले खर्च, लगानी, बचत, सापटी, कर योजना, दान आदि को विषयमा छलफल गर्न उत्साहित गर्छ।
जन ह्यान्सनद्वारा लिखित ‘गुड डेब्ट, ब्याड डेब्ट’ पुस्तकबाट